Umsebenzi Wokunakekela Nokusekelwa - Sffiltech
Ikhaya » Amaprosesa asekelwe » Umsebenzi Wokunakekela Nokwesekwa
Umsebenzi Wokunakekela Nokwesekwa Ukubhaliswa Kwewaranti Umshayeli nesofthiwe & Ukusekelwa kwencwadi yomsebenzisi Amavidiyo Okusekelwa Kwezobuchwepheshe
Siyabonga ngokuthenga izikhwama zethu zokuhlunga！
Ngokuphepha kwakho ekusebenziseni, inkampani ye-sffiltech yenze lesi sitatimende.
1. iwaranti yonyaka owodwa noma emihlanu
Ngemuva kokugcwaliswa kwekhasimende lethu lokusebenza kwesimo sefayela futhi uqiniseke ukuthi yonke imininingwane izoba efana nesimo sangempela sokusebenza kwendlu, khona-ke sizokwenza isiqiniseko sokuthi izikhwama zokuhlunga nezikhwama zokuhlunga nezinye izingxenye zesivumelwano esithile seminyaka, Izinkinga, ezibangelwa i-sffiltech uqobo, futhi akukho monakalo ovela eceleni, kufanele uqinisekiswe;
Uma izikhwama zokuhlunga zingapakishwa kahle futhi zilimele ngesikhathi sokuhanjiswa, akukho siqinisekiso sokukhathazeka.
Uma izingxenye ezisele, ngenxa yokupakisha nezinkinga zokuhambisa, zingasebenzi kahle, zivikelekile;
Sizonikeza ukuqondiswa okucacile kokuthi ungasikhetha kanjani usayizi wesikhwama sokuhlunga futhi uqiniseke ukuthi kungasebenza kahle endlini yesikhwama sakho,
Kungakapheli isikhathi iwaranti, ukuthenga noma ukufaka okunye esikhundleni, sithwala izimpahla. Ngemuva kwesikhathi sewaranti, ngeke sithwale umthwalo.
2. Ukubuyiselwa kwamahhala kwesikhwama sokuhlunga okusha
Ikhwalithi yesikhwama sethu sokuhlunga iqinisekiswe ngo-100%, futhi uma kungesona isizathu sokukhetha isikhwama sokuhlunga esifanele, lapho-ke sizothatha umthwalo wokufaka zonke izikhwama zokuhlunga mahhala ngonyaka owodwa iwaranti.
3. Ukubonisana kwamahhala online
Ochwepheshe bazogcina online. Akunandaba noma hlobo luni lwemibuzo yobuchwepheshe ongaba nayo, uzothola impendulo egculisayo kusuka kochwepheshe bethu abaqeqeshiwe kalula.
4. Isiqondisi samahhala se-onsite ekufakweni
Uma ukwazi ukusisiza ekutholeni i-visa futhi futhi ungathanda ukuthwala izindleko ezibandakanya amathikithi endiza, ukudla, indawo yokuhlala, njll., Singathumela ochwepheshe bethu abahle kakhulu ehhovisi lakho, futhi bazokunikeza umhlahlandlela ophelele wokufakwa uze ukwazi ukusebenzisa izikhwama zokuhlunga.